XOG: Shan Arrimood Oo Muhiim Ah Oo Khuseeya Nolosha Xiddiga Manchester United Ee Bruno Fernandes Oo Laga Yaabo In Aanad Ogeyn | Laacib.net
XOG: Shan Arrimood Oo Muhiim Ah Oo Khuseeya Nolosha Xiddiga Manchester United Ee Bruno Fernandes Oo Laga Yaabo In Aanad Ogeyn
March 21, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on XOG: Shan Arrimood Oo Muhiim Ah Oo Khuseeya Nolosha Xiddiga Manchester United Ee Bruno Fernandes Oo Laga Yaabo In Aanad Ogeyn
Manchester Untied waji cusub ayay yeelatay intii ka dambaysay bishii January ee sannadkan, waxaana mahaddeeda leh saxeexa cusub ee reer Portugal ee Bruno Miguel Borges Fernandes oo ay kasoo iibsatay Sporting Lisbon, isla kulankiisii ugu horreeyeyna laga dareemay Old Trafford saamayntiisa.
United waxay mar horeba kusoo baxday naadiyada loo saadaalinayo inay ku guuleysanayaan tartanka UEFA Europa League oo ay siddeed dhamaadka u gudubtay, sidoo kalena waxay taagan yihiin siddeed dhamaadka FA Cup iyo Premier League oo ay kaalinta shanaad ku jiraan, isla markaana saddex dhibcood oo kaliya ka hoosaysa Chelsea oo afraad fadhida. Haddii Europa League ay wiilasha Solskjaer ku guuleystaan, waxay taas macnaheedu tahay inay si toos ah uga qayb-geli doonaan Champions League xili ciyaareedka dambe, xattaa haddii aanay ka mid noqonin afarta ugu sarreeya horyaalka xili ciyaareedkan.
Bruno Miguel Borges Fernandes waxa bishii February loo doortay xiddiga ugu wanaagsanaa Manchester United, sidoo kalena abaal-marinta bisha ee Premier League ayuu qaatay.
Hoggaamintiisa, tayadiisa iyo fursadaha caqliga ku dhisan ee uu isticmaalayo, waxay maalin walba oo uu ciyaaro reebaan hadal-hayn laga sii sheekeeyo toddobaad dhan, waxase la is weydiinayaa sida ay Red Devils noqon doonto marka ay usoo laabtaan Paul Pogba iyo Marcus Rashford.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan arrimood oo laga yaabo in aanad ogeyn oo ku saabsan xiddiga reer Portugal ee lambarka 18-ka xidhan.
5. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A ayuu afar sannadood ka ciyaaray
Xagaaga sannadkii 2012 ayuu ku biiray Novara Calcio iyadoo ay da’diisu yar tahay, waxaanu ku biiray ciyaartoyda kulliyadda da’yarta oo markiiba uu kasoo dallacay. Qayb ka mid ah xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee 2012/13, waxa uu ka mid ahaa kooxda koowaad, iyadoo uu ka caawiyey in naadigiisu uu soo galo kaalinta shanaad. Waxa uu usii dhaafay kooxda horyaalka Serie A ee Udinese oo uu sannadkii xigay u dheelay. Fernandes waxa uu Stadio Friuli ka ciyaaray saddex sannadood oo uu u saftay 95 kulan oo uu ku dhaliyey 11 gool.
August 2016, ayaa uu amaah ugu wareegay kooxda Sampdoria, waxaana heshiiskaas ku jiray qodob siinaya kooxda Talyaaniga inay heshiis rasmi ah u beddeli karayso amaahda. Waxa uu La Samp u ciyaaray 35 kulan oo Serie A ah, waxaanu u dhaliyey shan gool.
Laakiin kooxda Talyaanigu, waxay qaadatay go’aan qaldan waxaanay iska diiday inay amaahdii ku beddesho heshisi rasmi ah, waxaan ka faa’iidaysatay kooxda reer Portugal ee Sporting Lisbon oo sannadkii xigay qaadatay. 119 ciyaarood oo isku-geyn uu afartii sannadood ee Serie A uu ka ciyaaray, waxa uu dhaliyey 15 gool.
4. Wuxuu guursaday gabadhii ay is jeclaayeen xilligii dugsiga waxbarashada
Xaqiiqada nololeed ee Bruno Fernandes, waxay ku dhisan tahay farxad iyo jacayl. Waxa garabkiisa taagan gacalisadiisii xilligii dugsiga waxbarashada oo ugu dambayntii uu guursaday. Dadka sida fiican u yaqaana, waxay sheegaan inuu yahay qof ku wanaagsan jilista jacaylka, laakiin aan guurguurka iyo socodka badan ee dhinaca dumarka ku wanaagsanayn.
Fernandes waxa uu Ana Pinho la kulmay xilligii dugsiga ay dhiganayeen iyadoo ay da’doodu ahayd 16 jir.
Jamaahiirta Manchester United markii ay soo dhoweynayeen Fernandes, waxay ku heesayeen magaca Ana, waana arrin ay kaga farxinayeen isaga maadaama ay jacaylkiisa tahay. Waxay gabadhani qayb weyn kasoo qaadatay noloshiisa, gaar ahaan xilliyadii uu joogay Talyaaniga oo ay ku adkaatay inuu la qabsado nolosha waddankaas.
December 2017 ayay saaxiibtinimadii iyo jacaylkii carruurnimada guud u beddaleen, canugoodii u horreeyeyna waxa uu u dhashay January 2017.